Indlu ye-Koralmblick ❤ ipulazi lezivakashi ezingu-2-4 ★★★ - I-Airbnb
Indlu ye-Koralmblick ❤ ipulazi lezivakashi ezingu-2-4 ★★★
Altenmarkt, Steiermark, i-Austria
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Burgi
U-Burgi unokuphawula okungu-22 kwezinye izindawo.
I-Haus Koralmblick ❤ farmhouse anno 1820 emgwaqweni wewayini oseningizimu we-Styrian ekhaya ❤ & wesimanje ❤ emindenini, amaqembu, imibhangqwana, abagibeli bamabhayisekili, abagibeli bamabhayisekili nabanikazi bezinja... ☀☀☀ Zizwe kahle EHLOBO nasekwindla, EBUSIKA & ❤ ENTWASAHLOBO Nge-3400 sqm i-oasis yemvelo, igalaji & ❤ indawo yokubasa umlilo, iholide elisebenzayo & thola amakamelo okulala ❤ angu-3 ❤ BBQ, i-gazebo, eduze nehlathi ❤ i-Graz ekuhambeni ❤ kwebhayisikili kanye nomgwaqo wewayini emnyango wakho ❤
Indlu yasemapulazini endala kusukela ngo-1820 ilungiswe ngokuphelele. Ihlala egqumeni elincane, ngaphandle kwedolobhana, elizungezwe amasimu - phansi kwama-mountians e-Koralm. Ihlotshiswe ngezandla zesimanje, inikeza indawo yomlilo ethokomele eceleni, i-grill ngaphandle, kanye nendawo yokuphumula engadini yokuhlala ngaphandle - futhi ayinayo i-TV (cha) ne-WLAN. # digital-detoxing
Yindawo ekahle yokuqala yokuzijabulisa ngebhayisikili, umjikelezo wezimoto noma ngezinyawo. Noma - uma ufisa, kuyindawo enhle yokulengisa, - futhi ungenzi lutho, kunconywa yi-3500 sqm eluhlaza, i-gras kanye nehlathi... konke kwakho! Vele ube: nokudla okumnandi, iwayini, ukuvakashela izindawo zendawo...
Noma, hlola izindawo zendawo neziseduze & imizila nezindawo ezibukwayo
I am Burgi, born in the southern part of Styria, now living in Bavaria - me and my Co-Host Elisabeth @ Gasthof Mauthner "Kirchenwirt" in Wies, would be happy to be your host for a pleasant stay in lovely southern Styria.
* Ngiyajabula ukunikeza u-Elisabeth Mauthner, umbungazi we-Kirchenwirt e-Wies, amacebiso ngezindawo ezifanele zokuhamba, uhambo lwamabhayisikili, njll.
* Isidlo sasekuseni singacelwa futhi kusuka ku-Nksz. Mauthner (ukuthi ihlelwe & ikhokhwe ngokuhlukile)
* Isidlo sasekuseni sin…
Hlola ezinye izinketho ezise- Altenmarkt namaphethelo